Anigoo ah macaamil Iswiidhish ah, maxaan ugu baahnahay inaan bixiyo lambarkayga amniga bulshada? – Transfer Galaxy
Anigoo ah macaamil Iswiidhish ah, maxaan ugu baahnahay inaan bixiyo lambarkayga amniga bulshada?
Waa wax muhim ah inaan awoodno inaan ku hayno adeegga Transfer Galaxy si ammaan ugu ah iyo ilaalin ugu leh dhammaan macaamiisheena, Iyadoo e-ID (BankID) ay tahay sida ugu fudud ee ugu haboon ee lagu aqoonsan karo qofka tani waa ikhtiyaarka la doorbidayo marka la heli karo. Si loo isticmaalo BankID qofku waa inuu galiyaa lambarkiisa amniga bulshada.
Transfer Galaxy waligeed lama wadaagi doonto wax macluumaad ah maamulada ama hay'adaha kale ee dawlada illaa haddii uu sharci looga baahdo inay sidaa sameeyaa iyadoo la xiriiran. baaris dambi ah oo la xiriira lacag dhaqida ama maalgelinta argagixisada.
7 din 8 au considerat acest conținut util